Isibaya seholide kwigadi entle - I-Airbnb
Isibaya seholide kwigadi entle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSilke
Indawo yokugcina iiholide yinxalenye yefama eyakhiwa ngo-1779 kwaye ikwiBrandenburg Havelland, kwigadi eyi-5000 m2 idyllic. Indawo iNeuwerder / Gollenberg inabemi abamalunga nama-50 kwaye inokufikelelwa ukusuka eBerlin malunga neyure.
Indlu ine-230 m2, inesisa kwaye ivulekile, icacile kwaye yangoku.
I-barn yeholide ifanelekile kubo bonke abantu abafuna ukunandipha uxolo kunye nokuzola kunye nendalo.
Indlu ixhotyiswe ngekhitshi enkulu yokutya-e-63 m2 kwaye inika indawo eninzi. Kukwakho nomgangatho omkhulu we-3 kumgangatho osezantsi
Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Izinyuko ezibanzi zikhokelela kumgangatho ophezulu. Kukho amagumbi okulala amathathu, amabini anebhedi ezi-2 kunye negumbi lebhedi enye. Kukwakho negumbi leshawari enkulu kunye negumbi leqela le-70 m2.
Umnyango ovela ekhitshini-igumbi lokuhlala uvula kwi-terrace kwaye ngqo kwigadi. Kukho ifenitshala yegadi, izitulo zomgangatho kunye ne-hammock, kwaye kukho negrill.
Nceda unxibe iziliphu kuphela endlwini! Kubantwana, nceda uze ne-non-slippers okanye iikawusi zokumisa. Akukho mivalo phambi kwezitebhisi kwaye akukho zixhobo zokukhusela umntwana kwiisokethi.
Ilali eyayisakuba ngumkoloniyali iNeuwerder imi kumbindi weBrandenburg Havelland.
Le ndawo ibonakaliswe ngamahlathi kunye namadlelo, malunga ne-2km kukho ichibi lehlathi elihle elinendawo yokuhlambela yendalo kunye nendawo yokuhlambela elungele abantwana.
Esona sikhululo seenqwelomoya sidala ehlabathini kuku 3km kude. E-Stöllen kumgama we-100m phezulu i-Gollenberg u-Otto Lilienthal wenze iinzame zakhe zokubhabha kwaye wawa. Namhlanje kukho imyuziyam yenqwelomoya kunye nesikhululo seenqwelomoya sokubaleka.
E-Neustadt Dosse kukho enye yezona studs zaseburhulumenteni ezintle eJamani. Yakhiwe nguFritz wakudala, iphupha loyilo kunye nembonakalo entle kwaye ihlala ilufanele uhambo.
EKlessen kukho inqaba endala enegadi entle, imyuziyam yokudlala kunye nekhefi.
Kukho okungakumbi kunokubonwa kwiHavelland entle.
Ndiyafumaneka kwiindwendwe zam nangaliphi na ixesha, nokuba kwisiza okanye ngefowuni ukuba kukho imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gollenberg